Fitaovana conductive sy insulation: toetra sy toetra | Green Renewable
Conductive sy insulating fitaovana
Portillo Alemanina | 12/04/2022 12:00 | fiofanana
ny fitaovana conductive sy insulating izy ireo dia sokajiana araka ny fitondran-tenany mikasika ny herinaratra. Misy ny mahay mitondra herinaratra ary ny hafa kosa tsy afaka manao izany. Ireo fitaovana ireo dia manana toetra samihafa ary ampiasaina amin'ny sehatra samihafa amin'ny indostria sy ny trano.
Ato amin'ity lahatsoratra ity dia hilaza aminao ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny fitaovana conductive sy insulation ary inona ny tsirairay amin'izy ireo.
1 Conductive sy insulating fitaovana
2 Inona no atao hoe fitaovana conductive?
3 Inona no atao hoe fitaovana semiconductor?
4 Inona no atao hoe fitaovana superconducting?
5 Inona no atao hoe fitaovana insulating
6 Ohatra amin'ny fitaovana enti-mitondra sy manara-penitra
Ny fitaovana dia azo zaraina ho sokajy roa lehibe: conductors sy insulators. Mety tsara kokoa ny mamaritra azy ireo ho mpitarika tsara sy ratsy, miankina amin'ny hoe manamora na manakana ny fiara ny fitaovana tsirairay. Ity fizarazarana ity dia misy fiantraikany amin'ny conductivity mafana (izany hoe ny famindrana hafanana) na ny conductivity elektrika (izany hoe ny fikorianan'ny ankehitriny).
Miankina amin'ny fahafahan'ny elektrôna mandalo azy na tsia ny zavatra iray mitondra herinaratra. Tsy mihetsika ny protons satria, na dia mitondra fiampangana elektrika aza izy ireo, dia mifamatotra amin'ny protons sy neutron hafa ao amin'ny nucleus. Ny elektrôna valence dia toy ny exoplanets mihodidina kintana. Voasarika izy ireo mba hijanona amin'ny toerany, saingy Tsy mila hery be foana ny manala azy ireo amin'ny toerany.
Ny metaly dia mora very sy mahazo elektronika, noho izany dia manapaka ny lisitry ny conducteur izy ireo. Ny molekiola organika dia insulators ny ankamaroany, amin'ny ampahany satria izy ireo dia mifamatotra amin'ny fatoran'ny covalent (elektronika mahazatra), fa koa noho ny fatoran'ny hydrogène manampy amin'ny fanamafisana ny molekiola maro. Ny ankamaroan'ny fitaovana dia sady tsy conducteur tsara na insulators tsara. Tsy mitondra herinaratra mora izy ireo, fa rehefa misy angovo ampy dia mihetsika ny elektronika.
Ny fitaovana insulating sasany dia hita ao anaty fanjakana madio, fa mitondra tena na manao fihetsika kosa izy ireo raha atao dope miaraka amin'ny singa hafa kely na misy loto. Ohatra, ny ankamaroan'ny seramika dia insulators tena tsara, fa raha manova azy ireo ianao dia afaka mahazo superconductor. Ny rano madio dia insulator, fa ny rano maloto dia tsy dia mitondra, fa ny rano sira miaraka amin'ny ion mitsingevana malalaka dia mandeha tsara.
Inona no atao hoe fitaovana conductive?
Conductors dia ireo fitaovana izay mamela ny elektronika mikoriana malalaka eo anelanelan'ny singa. Ny zavatra vita amin'ny fitaovana conductive dia mamela ny famindrana fiampangana manerana ny velaran'ilay zavatra. Raha misy fiampangana afindra amin'ny zavatra iray amin'ny toerana iray, dia zaraina haingana amin'ny lafiny rehetra amin'ilay zavatra.
Ny fizarana ny fiampangana dia vokatry ny fihetsiky ny elektrôna. Ny fitaovam-pitaterana dia mamela ny elektronika ho entina avy amin'ny singa iray mankany amin'ny iray hafa satria ny zavatra misy fiampangana dia hizara ny fiampangany foana mandra-pahavitan'ny hery fandroahana ankapobeny eo amin'ny elektronika be loatra. Amin'izany fomba izany, raha mifandray amin'ny zavatra hafa ny conducteur misy fiampangana iray, dia afaka mamindra ny fiampangany amin'io zavatra io mihitsy aza ilay conducteur.
Ny famindrana fiampangana eo anelanelan'ny zavatra dia mety hitranga kokoa raha ny zavatra faharoa dia vita amin'ny fitaovana conductive. Ny conducteur dia mamela ny famindrana fiampangana amin'ny alàlan'ny fivezivezena malalaka amin'ny elektronika.
Inona no atao hoe fitaovana semiconductor?
Amin'ireo fitaovana conductive dia mahita fitaovana mitovy amin'izany isika saingy afaka miasa toy ny insulators, na dia miankina amin'ny lafin-javatra maro aza izany. Ireto antony ireto dia:
ny hafanan'ny tontolo iainanao
Ny fitaovana semiconductor be mpampiasa indrindra dia silisiôma, germanium ary vao haingana no nampiasaina ny solifara toy ny fitaovana semiconductor.
Inona no atao hoe fitaovana superconducting?
Mahavariana ity fitaovana ity satria manana ny fahaiza-manaony izay tokony hitondran'ny fitaovana elektrika, saingy ao anatin'ny toe-javatra mety, tsy misy fanoherana na fahaverezan'ny angovo.
Amin'ny ankapobeny, mihena ny fanoherana ny conducteur metaly miaraka amin'ny fihenan'ny hafanana. Rehefa tonga ny mari-pana manakiana, dia mihena be ny fanoherana ny superconductor, fa miantoka fa ny angovo ao anatiny dia mitohy mikoriana, na dia tsy misy hery aza. Ny superconductivity dia noforonina.
Miseho amin'ny fitaovana isan-karazany izy io, anisan'izany ny firaka tsotra toy ny vifotsy na alimo izay tsy mampiseho fanoherana elektrika, ka manakana ny fitaovana tsy hiditra ao amin'ny sehatra misy azy. Izany no vokatry ny Meissner, mamela ny fitaovana ho voaroaka, mitazona azy mitsinkafona.
Inona no atao hoe fitaovana insulating
Tsy toy ny conducteur, ny insulators dia fitaovana manakana ny fikorianan'ny elektrôna malalaka avy amin'ny atoma mankany amin'ny atoma ary avy amin'ny molekiola mankany amin'ny molekiola. Raha afindra any amin'ny isolator amin'ny toerana iray ny enta-mavesatra, dia hijanona eo amin'ny toerana niavian'ilay entana ny entana be loatra. Tsy mamela ny fikorianan'ny elektrôna maimaim-poana ny poti-javatra insulating, noho izany dia zara raha zaraina mitovy ny fiampangana eo ambonin'ny velaran'ny akora manara-penitra.
Na dia tsy ilaina ny insulators famindrana fiampangana, mitana anjara toerana lehibe amin'ny andrana sy fihetsiketsehana electrostatic. Ny zavatra conductive dia matetika apetraka amin'ny zavatra insulating. Ity fandrindrana ny conducteur eo ambonin'ny insulator ity dia manakana ny fifindrana ny fiampangana avy amin'ny zavatra conductive mankany amin'ny manodidina azy, hisorohana ny loza toy ny circuits fohy na elektrika. Io fandaharana io dia ahafahantsika manodinkodina ny zavatra conductive nefa tsy mikasika azy.
Noho izany dia afaka milaza isika fa ny fitaovana insulating miasa ho toy ny tahony ho an'ny mpitarika eo an-tampon'ny laboratoara finday latabatra. Ohatra, raha misy lafarinina soda aluminium ampiasaina hampidirana ireo andrana, ny kapoaka dia tokony hapetraka eo ambonin'ny kaopy plastika. Ny vera dia miasa toy ny insulator, manakana ny soda tsy hivoaka.
Ohatra amin'ny fitaovana enti-mitondra sy manara-penitra
Ohatra amin'ny fitaovana conductive dia ahitana ireto manaraka ireto:
Ohatra amin'ny fitaovana insulation dia ahitana ireto manaraka ireto:
Ny fizarana fitaovana ho an'ny sokajy conducteur sy insulators dia zavatra amin'ny fizarana artifisialy. Mety kokoa ny mametraka ny fitaovana any amin'ny toerana manaraka ny continuum.
Tokony ho takatra fa tsy ny fitaovana conductive rehetra no manana conductivity mitovy, ary tsy ny insulators rehetra dia mitovy mahatohitra ny hetsiky ny elektronika. Ny conductivity dia mitovy amin'ny mangarahara amin'ny fitaovana sasany amin'ny hazavana.: Ny fitaovana mora "mandalo" ny hazavana dia atao hoe "mangarahara", fa izay tsy mora "mandalo" dia atao hoe "opaque". Na izany aza, tsy ny fitaovana mangarahara rehetra dia manana conductivity optika mitovy. Toy izany koa ny conducteur elektrika, ny sasany tsara kokoa noho ny hafa.
Ireo manana conductivity avo, fantatra amin'ny hoe superconductor, dia apetraka amin'ny tendrony iray ary ny fitaovana conductivity ambany kokoa dia apetraka amin'ny farany. Araka ny hitanao etsy ambony, ny metaly dia hapetraka eo akaikin'ny farany conductive indrindra, raha ny vera dia hapetraka amin'ny faran'ny continuum. Ny conductivity ny metaly dia mety ho iray tapitrisa tapitrisa heny noho ny fitaratra.
Misy fiantraikany amin'ny conductivity koa ny hafanana. Rehefa mitombo ny mari-pana dia mahazo angovo ny atôma sy ny elektrôna. Ny insulators sasany, toy ny fitaratra, dia conducteur ratsy rehefa mangatsiaka, nefa mbola conducteur tsara rehefa mafana. Ny ankamaroan'ny metaly dia conducteur tsara kokoa.. Izy ireo dia mamela ny hatsiaka sy ny conducteur ratsy kokoa rehefa mafana. Ny conducteur tsara sasany dia hita ao amin'ny superconductor amin'ny hafanana ambany dia ambany.
Manantena aho fa amin'ity fampahalalana ity dia afaka mianatra bebe kokoa momba ny fitaovana conductive sy insulation ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Fanavaozana maintso » General » fiofanana » Conductive sy insulating fitaovana
zavamaniry manadio ny rivotra